Best Movies dzine Zvitima | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > Best Movies dzine Zvitima
Best Movies dzine Zvitima
Chii chichakubatsira kukukurudzira kuti kutora chitima rwendo kupfuura kuona inonakidza Movies dzine Zvitima? Tora Kutarira kwedu pasi yakanakisisa Movies dzine Zvitima, uye Pedu pa @saveatrain uye kutiudza ndeapi zvawaona kana iwe wakada zvakawanda kwavari sezvo zvatakaita.
Pamusoro pegomo Sarudza kwedu Movies dzine Zvitima iri – Harry Potter Movies 1 kuti 8 (2001-2011)
Zvichienderana yakakurumbira akatevedzana mabhuku ne J.K. Rowling, izvi Movies sere dzine Zvitima anoratidza mashiripiti kufungidzira pamusoro muduku muuki, Harry Potter. Iye anodzidza zvaanazvo masimba emashiripiti uye inopinda Hogwarts School zvouroyi uye Wizardry, apo iye mukusanzwisisa upenyu hutsva yakazara zvakawanda nezvinetso, villains, uye yokubudirira.
Asi apo kuita zvitima kupinda? On Harry zuva kuchikoro rokutanga, anofanira vakwire Hogwarts Express, chitima riri pachikuva 9 ⅓. Ndiyo chete svikika kubudikidza achimhanya – kutsanya- kurutivi wall pakati platforms 9 uye 10. Kamwe mune chitima, iye akasangana Ron Weasley uye Hermione Granger, uyo anopedzisira ari ake shamwari upenyu-refu.
Munyika dzose mafirimu, ari Hogwarts Express chitima rinoramba kufananidzira mavambo uye kuguma chikoro gore rimwe nerimwe uye rinopa kanivhasi vamwe runako kuyevedza nyaya-mitsetse. Kunyanya iyo Harry uye Ron achisuwa chitima uye akanga nhunzi ane enchanted motokari kuchikoro!
Ita chokwadi iwe kukopa pane imwe Movies izvi uine Zvitima yenyu pafoni kana piritsi usati bhuku rako inotevera chitima rwendo.
Amsterdam kuenda kuLondon nezvitima
Rotterdam kuenda kuLondon nezvitima
Paris kuenda kuLondon nezvitima
Brussels kuenda kuLondon nezvitima
Chinyorwa chakagovaniswa naSinefil (@ city.of.cinema)
Quirky uye bata, Sarudza iyi, Movies dzine Zvitima, ane zvose zviratidzo zvayo munyori-wekambani, Wes Anderson. Baba vavo asangana kwetsaona rufu, Hama nhatu kufamba munzvimbo India nechitima achiedza noukama.
ReDare Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman, mukoma mumwe ari kutambura nokuora mwoyo, uye yakawanda akazvidya mwoyo uye kurwa kweropa. Asi chokwadi, kuva Wes Anderson kufirimu – pane zvakawanda sekesa dzinokanganisa uye majana. Imwe hama yakasiya yake nepamuviri mukadzi kumba uye mumwe akaparadzana nemusikana wake uye anowana kudanana nemumwe wevashandi vechitima.
Panewo nyoka ine uturu, mariro, mumwe nokufungisisa uye ... zvakanaka, hatingavapi chinhu kure. Rega iyi yechinyakare yechinyakare ikukurudzire kuti uodha yako wega chitima ushingi.
Nuremberg kuenda Berlin nezvitima
Aachen kuenda Berlin nezvitima
Hanover kuenda Berlin nezvitima
Hamburg kuenda Berlin nezvitima
Umhondi pamusoro dzokumabvazuva Express (2017)
Tsamba yakagovaniswa naSteve (@grushkov)
Zvichienderana yakakurumbira Agatha Christie yokufungidzira, remake ichi ano ane kukandira nyeredzi-rakazara kusanganisira Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Johnny depp, naWillem Dafoe. Kenneth Branagh ndiye kutungamirira basa Hercule Poirot, uye iyewo akatungamirira firimu uye ichi ndicho chikamu Movies dzedu dzine Zvitima.
Tisingatauri pakusuma uye vamwe kufunga zvakaitika kare, yose storyline rakamiswa pamusoro umbozha chitima. Poirot mapuranga nokuAsia Express kutora yakakodzerwa refu kuzororo. Mune yekutanga-kirasi yakasarudzika bar uye yokudyira motokari, anosangana neboka revatariri vanoita sevasina hukama. Mumwe wavo anoti upenyu hwake pangozi uye anoedza rokutsvaka Poirot – imwe usingakudzwi Detective – kuti amudzivise akachengeteka.
anoramba, uye vatakurwi zvose warara. Mangwanani akatevera, mufambi akawanikwa akapondwa. Kuti zvinhu zvakawanda zvinoshamisa, chitima derails iri chando. Poirot iri basa kugadzirisa mhosva chitima asati adzoka mudambudziko uye mapurisa ave kuziva umhondi.
Mune zvakanaka akaudza, zvinoshamisa chakavanzika thriller, nyaya zvakunowedzera sezvo Poirot kubvunzurudzwa mumwe mufambi uye anowana kuti mumwe nomumwe wavo ane zvakavanzika uye kwete zvose zviri sezvo zvinoita.
Uyu unofanira-kuona pakati, Movies dzine Zvitima, kwete chete nokuti kupenya storyline uye vomuzana kirasi nokuita asiwo Vakamupfekedza girl uye maonero ari chitima pachayo.
Brussels kuenda kuAmsterdam nezvitima
London kuenda kuAmsterdam nezvitima
Bonn kuenda kuAmsterdam nezvitima
Paris kuenda kuAmsterdam nezvitima
The Little Engine vaigona (2011)
Kana uine shoma adventurers parwendo newe, kuti nazvo inovapo yerwendo iri mbudzana-ushamwari firimu. ngano The klassiske vana anouya upenyu renguva yakareba kufirimu aine nyeredzi-rakazara chakakandirwa. Celebs vanotaurwa vanosanganisira Jamie Lee Curtis uye Whoopi Goldberg.
Firimu kunotevera Little Engine – chitoyi chitima – kumarudzi adventures wake dreamland, sezvo iye interacts nevamwe chitima vatambi uye matoyi. Pane kufanana storyline munyika chaiyo, apo protagonist kamukomana inonzi Richard. zvisinei, nyika idzi mbiri dhumhana apo Richard anoguma mukati dreamland. Kuvapo kwake ikoko kunokonzera matambudziko, so he needs to go back. Adventure and hijinks ensue while he and the toys try to get him back into the real world.
Ndeipi nzira huru yekufemerwa neMafirimu Akaratidza Zvitima zvekufamba nezvitima!
Brussels kuParis nezvitima
London kuenda kuParis nezvitima
Marseille kuenda kuParis nezvitima
Amsterdam kuenda kuParis nezvitima
Ready kunyora pachako Movies zvenyu uine Zvitima akarondedzera nyaya? kushanya www.saveatrain.com uye kuwana yakachipa pashiri chitima matikiti wenyu inotevera chitima ushingi.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-movies-featuring-trains%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / kuti ru to / kes kana / of uye mimwe mitauro.
#HarryPotter trainmovies chitima mazano
pamusoro 5 Things Kuitira On A Short Kushanyirwa To Luxembourg
Chitima Kufamba Luxembourg, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe